बढ्यो स्वास्थ्य सचेतना, घटे बिरामी, अस्पताल जाँदा पिपिई ! – Health Post Nepal
बढ्यो स्वास्थ्य सचेतना, घटे बिरामी, अस्पताल जाँदा पिपिई !
डा. अधिकारीको ओपिडीमा पिपिपईसहित आएको सेवाग्राही ।
भदौ २६ :दैनिक १ हजारभन्दा बढी ओपिडी सेवाका लागि अस्पताल आउने भरतपुर अस्पतालमा अहिले मुस्किलले ५ सय आउँछन् ।
गर्मी मौसमसँगै यो चाप अझै बढ्थ्यो । त्यसमा पनि ३५ प्रतिशत भन्दा बढि बिरामी सरुवा रोगका हुन्थ्थे ।
यो वर्ष अस्पतालहरुका दृश्य बदलिएका छन् । सामान्य रुघाखोकी वा लक्षणमा पनि अस्पताल गइरहाल्नेहरु अहिले हतपत जाँदैनन ।
त्यसमा पनि विशेषगरी कोभिड महामारीका कारण बढेको सरसफाई चेतना, होटल रेस्टुरेन्टमा खाने चलनमा कमी, नियमित योग व्यायामजस्ता स्वास्थ्यमैत्री आनीवानीका कारण संमग्रमा सरुवा रोगका बिरामी घटेको चिकित्सकहरुको अनुभव छ ।
नसर्ने रोगका र नियमित परीक्षण र फलोअपमा जाने बिरामी पनि अहिले जटिलता नदेखिएसम्म अस्पताल पुग्ने गरेका छैनन् ।
जानै परेर गएकाहरु पनि व्यक्तिग सुरक्षा सामग्री पिपिईसमेत लगाएर अस्पताल पुग्छन् ।
‘झाडापखाला, मौसमी फ्लु, भाइरल ज्वरो, रुघाखोकी, डेंगी, स्क्रब टाइफस आदिका बिरामीको भीड हुन्थ्यो ।’ भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष तथा फिजिसियन डा.भोजराज अधिकारीले भन्छन् ‘आजभोलि अस्पताल आउने यस्ता बिरामी निकै कम छन् ।’
बिगतका आर्थिक बर्षको सिजनल रोगका बिरामी मात्रै दैनिक ५ सयको हाराहारी हुने गरेकामा अहिले ५० को हाराहारीमा विशेगागरी ज्वरोका बिरामी ५० आउने गरेको अस्पतालको मेडिकल रेकर्ड शाखाका प्रमुख नारायण रिजालले बताए ।
यो बर्ष भरतपुर अस्पतालमा मात्र होईन जिल्लाका अन्य अस्पतालमा पनि यस्ता बिरामीको संख्या न्यून रहेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकाअनुसार, चितवनका विभिन्न अस्पताल दैनिक औसत ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा ओपिडी सेवा लिने गर्थे ।
त्यसमध्ये १ हजार पाँच सय बिरामी ज्वरोका मात्र हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दिपक तिवारीले जानकाी दिए ।
‘तर यो सिजनमा चितवनमा प्रतिदिन १ हजार ९ सयको हाराहारीमा बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।’ उनले भने ।
कोरोनाका कारण अन्य सरुवा रोगमा कमी आएको तिवारीको दावी छ ।
‘लकडाउनमा घरमै बस्दा मानिसहरुको खानपान मिलेको छ । बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने गरेका छन् । भिडभाडका कारण सरुवा रोगहरु बढ्ने हो, अहिले कम छ ।’
उनले थपे– ‘खानपान, बानी व्यहोरा र अहिले अपनाउने सावधानीले गर्दा यतिखेर कोरोनाबाहेक अन्य सरुवा रोग एकदम कम देखिएको छ ।’
नियमित रुपमा हात धुने, खानपानमा ध्यान दिने जस्ता सावधानीका कारण पनि सरुवा रोगको प्रकोप नदेखिएको हुन सक्ने तिवारी बताउँछन् ।
चितवन जिल्लामा ७५ वटा अस्पताल र ८५ वटा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्था रहेका छन् । सबै अस्पतालमा यो बर्ष बिरामीको संख्या कम रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको दावी छ ।
कारोना फैलिएपछि सकेसम्म अस्पताल जान नपरोस भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने भावन बढेको बुझाई चिकित्सकहरुको छ ।
बिरामीहरु पनि पछिल्लो समयमा धेरै सचेत भएको कुरामा भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. अधिकारी पनि सहमत छन् ।
‘अहिले अस्पतालमा आउँदा बिरामीहरु आफै पिपिई लगाएर आउने गर्नुभएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसंग सकेसम्म नजिक बसेर घुलमिल हुनुहुँदैन ।
शरीरको धड्कन जाँच गर्दा समेत सचेत हुनुहुन्छ ।’ डा. अधिकारीले भने ।
अस्पताल तथा सार्वजनिक रुपमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बिरामीलाई अस्पताल जान डराउने गरेका छन् ।
परीक्षण गर्ने समयमा कुर्सिमा बस्नसमेत बिरामी डराउने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘
अस्पताल जान डर छ भन्ने नाममा गम्भीर रोगका लक्षणलाई वेवास्ता गरेर चाँही बस्नुहुन्न’ डा. अधिकारीले भने ।
सरुवा रोगमात्र नभएर अहिले कोरोनाका कारण प्राथमिकतामा नपरेका अन्य शारीरिक एवं मानसिक रोगको समयमै उपचार नहुँदा दीर्घ समस्या र जटिलता निम्तिनसक्ने डा. अधिकारीको त्रास छ ।
डा. अधिकारीको ओपिडीमा पिपिपईसहित आएको एक सेवाग्राही ।
Tags: सरुवा रोग